Teza: “Tsy manara-dalàna ny HCC” | NewsMada
Teza: “Tsy manara-dalàna ny HCC”
Par Taratra sur 29/08/2018
“Roa ihany ny asan’ny HCC: mijery ireo lalàna sy ny fanapahan-kevitry ny mpitondra hoe mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana sa tsia, mitsara ny momba ny fifidianana.” hoy ny filoha nasionalin’ny antoko Teza, Rakotoamboa Jean-Louis. Nokantsanany ny andininy be dia be nolanin’ny Antenimiera roa tonta tao anatin’izany.
Tokony hanao fanaraha-maso ny tsy mety ny HCC, ary haveriny any amin’ny parlemantera hodinihina ny lalàna. Manara-maso izy raha araka ny lalàmpanorenana izany na tsia fa tsy manapaka ny esorina na ahitsy. Fahotana izany.Vokany, lalàm-pifidianana kitoatoa.
Fahotana nataon’ny HCC koa, miseho ho mpamaha olana politika izy. Nasainy manao governemanta iraisana ireo nifanditra saingy navela ny sasany… Nanome baiko izy fa tsy maintsy tafatsangana haingana ny governemanta. ”Tsy andraikiny izany. Tsy manan-jo hitaky ny tokony hatao izany ny kandidà hafa fa didy jadona fotsiny izao ny atao? Mampiady ireny”, hoy ny filohan’ny Teza.
Tsy ho menatra ny HCC hamboaboatra ny voka-pifidianana , araka ny mahamety azy ho an’ny kandidàn’ny firenen-dehibe.